Halyeey Rio Ferdinand Oo Sheegay Goolhayaha Kaliya Ee Uu David De Gea Kaga Samri Karo Mana Aha Dean Henderson - Gool24.Net
Halyeey Rio Ferdinand Oo Sheegay Goolhayaha Kaliya Ee Uu David De Gea Kaga Samri Karo Mana Aha Dean Henderson
Halyeeyga kooxda Manchester United haatana doorka falanqeeyenimo kaga shaqeeya kanaalka BT Sport ee Rio Ferdinand ayaa shaaca ka qaaday goolhayaha uu ku doorsan lahaa xiddiga kooxdiisii hore ee David De Gea.
David De Gea ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay aan ahayn goolhayihii lagu yaqaanay ee jamaahiirta qaar u aqoonsanaayeen midka dunida ugu wanaagsan booskiisa isaga oo soo samaynayay qaladaad dilaa ah oo natiijooyin go’aaminayay.
Kulankii ugu dambeeyay ee uu eedaynta ba’an kula kulmay 29 sano jirka ree Spain ayaa ahaa midkii ay Chelsea guuldarrada 3-1 ka ah kala kulmeen afar dhammaadka FA Cup.
Haddaba, Ferdinand ayaa sheegay in goolhayaha caalamiga ah ee De Gea booska Old Trafford uu kaga bedeli lahaa inuu yahay Jan Oblak oo Atletico Madrid ka tirsan.
Rio ayaa ku dooday in lacagta Oblak ay tahay mid badan oo aan suurogal ahayn isaga oo taas bedelkeeda sheegay inuu isagu sii haysan lahaa De Gea oo uu sheegay inuu waxyaabo badan oo lagu sii aamino kooxda usoo sameeyay.
“Yaa halkaas jooga hadda oo lasoo iibsan karaa, oo awooda inuu goolhaye heer caalami ah ka noqdo Manchester United? midka kaliya ee aan arkaa waa Oblak, laakiin Atletico Madrid maka soo saari kartaa isaga” ayuu yidhi Rio Ferdinand.
“Haddii aad sidaas samayno (Atletico kasoo kaxayso Oblak) intee in le’eg ayaad bixinayaa? xadi lacageed oo xun”
“Waan ka niyad jabsanahay De Gea, anigu isaga ayaan ku dhaganaanayaa, wuu shaqaystay xuquuqda ah in lasii haysto”